Iingcaphuno ezivela kuMongameli Abraham Lincoln
UAbraham Lincoln wayekhonza njengoMongameli we-16 waseMelika e-United States, ngexesha leMfazwe yaseMelika . Wabulawa kungekudala emva kokuqala kwekota lakhe yesibini njengomongameli. Ukulandela iziqendu ezivela kumntu abaninzi bakholelwa ekubeni ngumongameli obalulekileyo.
Kwi-Patriotic and Politics
"Ngobubi obungenanto, kunye nothando kubo bonke, ngokunyaniseka okulungileyo, njengoko uThixo asinika ukuba sibone okulungileyo, makhe sizame ukugqiba umsebenzi esikuwo, ukuba sibophe amanxeba esizwe, ukuba sinyamekele lowo Uya kuthwala imfazwe, kunye nomhlolokazi wakhe kunye neenkedama zakhe - ukwenza konke okufezekileyo nokuzazisa uxolo olufanelekileyo nolunaphakade phakathi kwethu kunye nazo zonke iintlanga. " Kuthe ngethuba leNgcaciso yesiBini sokuSungulwa esinikezwe ngoMgqibelo, Matshi 4, 1865.
"Yintoni i-conservatism? Ngaba ayinamathela kumdala kunye nokuzama, ngokuchasene nokutsha kunye nokungatshatanga?" Echazwe ngethuba le-Cooper Union Speech eyenziwa ngoFebruwari 27, 1860.
"'Indlu ehlukeneyo ngokwazo ayikwazi ukuma.' Ndiyakholwa ukuba lo rhulumente akakwazi ukunyamezela isigxina esigxina isigxina kunye nesiqingatha samahhala.Ingalindelanga ukuba iNyunithi ichithwe - Andilindeli ukuba indlu iwele-kodwa ndilindele ukuba iya kupheliswa. Kuya kuba yinto enye, okanye zonke ezinye. " Echazwe kwiNdlu Intetho eyahlukileyo ehanjiswa kwiNgqungquthela yeSizwe yaseRiphabhuliki ngoJuni 16, 1858 e-Springfield, e-Illinois.
NgoBuchule noLingana koBucala
"Ukuba ubukhoboka abubi, akukho nto iphosakeleyo." Echazwe kwileta eya kwi-AG Hodges ebhalwe ngo- Ephreli, 4, 1864.
"[Indoda] ekhululekile, akukho sikhalazo esiyimpumelelo esivela kwivoti ukuya kwi-bullet; kwaye abo bathabatha isibheno esinjalo baqiniseke ukuba balahlekelwa isizathu, bahlawule iindleko." Kubhalwe kwileta eya kuJacob C. Ukudibanisa. Oku kwakufuneka kufundwe kubantu abaya kwiintlanganiso ngomhla kaSeptemba 3, 1863.
"Njengesizwe, saqala ngokumemezela ukuba" bonke abantu badalwa ngokulinganayo. "Ngoku siyifunda ngoku," Bonke abantu badalwa ngokulingana, ngaphandle kweNigroes. "Xa i-Know-Nothings ilawulwa, iya kufundwa," Bonke abantu zidalwe zilingana ngaphandle kweNigroes, kunye nabangaphandle, kunye namaKatolika. "Xa kufikelele kule nto ndimele ndithande ukufudukela kwelinye ilizwe apho bengenzi ukuzenzela inkululeko yothando - eRashiya, umzekelo, apho ukuxhomekeka khona kunokuthi kuthathwe ucocekileyo, ngaphandle isiseko se-hypocleism. " Kubhalwe kwileta eya kuJoshuwa kwi-Agasti 24, 1855. Ukukhawuleza kunye noLincoln babebe ngabahlobo ukususela ngo-1830.
"Inyaniso ngokuqhelekileyo ingqinisiso engcono ngokunyundela." Ichazwe kwincwadi eya kuNobhala weMfazwe uEdwin Stanton ngoJulayi 18, 1864.
"Kuyinyani ukuba ulahlekise abantu bonke ngexesha, unokubakhohlisa abanye abantu ngexesha lonke, kodwa awukwazi ukukhohlisa bonke abantu ngaso sonke isikhathi." Inikwe uAbraham Lincoln. Nangona kunjalo, kukho umbuzo malunga nalokhu.
"[B] ii-ooks zinokubonisa umntu ukuba ezo ngcamango zangaphambili azilutsha, emva koko." Kukhunjulwe nguJ JE Gallaher encwadini yakhe malunga neLincoln ebizwa ngokuba yiNew Lincoln Stories: iTersely Told eyapapashwa ngo-1898.
Yintoni Umgaqo-nkqubo wasekhaya eMbusweni wase-US?
UCalvin Coolidge: UMongameli we-30 we-United States
Abraham Lincoln kunye neTelegraph
Inkolelo Ngokuphathelele Obama kunye neMithi yeHlolide
Ukufundiswa kwabafundi abangabonakaliyo
Ukuchaza 'ngaphandle kweBounds' eGoli kunye neNkundla yokulahla ibhola OB
IGraphology (Uhlalutyo lokuBhala ngesandla)
Ezi-10 eziphezulu zokusebenza
Ukuqhawula: Imisebenzi yokuqhekeka kwiindawo ezilawulwayo
Ngamaxesha amaninzi Ngaba Ufuna Ukuhlamba Ukufikelela Iinjongo Zakho?
Ukugqoka, ukuGqoka kunye naphi
Yintoni i-Aesthetics? Ifilosofi yobugcisa, ubuhle, ukuqonda
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zeTendonitis
Iingcaphuno malunga nezovuyo zasebusika
I-Anatomy kunye neBiology yeLeaf Tree